2 maturusi ekuona mafaera kubva kune iyo terminal | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi, mushure mekuverenga musoro wenyaya ino urikufunga nezvayo zvishandiso senge concatenator kana kati, kuona zvirimo zvemafaira ezvinyorwa, kana zvakare muzvishandiso zvinoita sezvishoma uye nekuwedzera zvinotibvumidza kuona zvirimo nenzira inodzorwa zvakanyanya kana iri yehukuru hwakakura uye isu tinoda kuidzvinyirira uye kufamba nayo. nzira yakapusa kubva kumutsetse wekuraira.
Pamwe iwe urikufungawo nezve vapepeti vakaita se vi, vim, gedit, nano, nezvimwe, asi isu hatisi kureva kune aya marudzi ezvishandiso, asi kune maviri chaiwo maturusi ayo achabatsira zvakanyanya kana zvasvika tarisa zvirimo faira kubva pamutsetse wekuraira, pasina kushandisa graphical zvishandiso. Haasi chaiwo maturusi ezuva nezuva, uye haanyatso kubatsira pakuratidza zvemukati, asi isu tichavaita kuti vashandire izvi ...
Ndiri kureva AntiWord uye odt2txt. Ehe, maturusi maviri anonyatsoita kushandura pakati pemafomati. Chekutanga kushandura zvinyorwa zveMicrosoft Word senge .doc kana .docx kuti zvive zvinyorwa zvemavara, kunyangwe iwe uchikwanisa kuzvishandurirazve kuPDF kana kunyange PostScript, iyo yekupedzisira ichinyanya kushanda nekushanda nemamwe maprinta. Yechipiri chirongwa chekushandura kubva .odt, iyo yakavhurika gwaro fomati, kuenda ku .txt.
Uye tingaite sei maturusi aya, kunze kwe pindura, ivo vanotitaridzawo mhedzisiro pachiratidziro patinoshanda mune terminal, nekuti iri nyore kwazvo: mapaipi uye zvishoma kana kupfuura. Saka isu tinogona kuona izvo zvirimo mukuwedzera pakutendeuka, kuendesa iwo wekuraira kuita kushoma kana kupfuura:
Unogona kushandisa zvishoma kana kupfuura kusava nehanya mune imwe kana imwe. Zvichienderana nekuti iwe unofarira here kuburitsa iyo inopa shoma kana iyo inopa yakawanda. Zviripachena, iwe unofanirwa kunge uine maviri mapakeji akaiswa pane yako distro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » 2 maturusi ekuona mafaera kubva kune iyo terminal